मीन एक : भाम अनेक - विचार - नेपाल
प्रसंग १ : नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई नियमन एवं व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकउपर रिपोर्टर्स क्लबमा बोल्दै गरेका सञ्चारमन्त्रीमाथि फिल्म निर्देशक मीन भामले जुत्ता प्रहार गरेका छन् । प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार भामको किम्ती जुत्ताको बजार मूल्य कम्तीमा २७ हजार पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
प्रसंग २ : मीन भामले आफ्नै चलचित्रका सिनेमाटोग्राफर प्याराजंग पराजुली, ४५, को गोली प्रहार गरी हत्या गरेका छ । प्रहरीका अनुसार भामका इच्छाविपरीत दिवंगत पराजुलीले चलचित्रकी नायिकाको नग्न दृश्य छायांकन गरेका थिए ।
प्रसंग ३ : दरबारमार्गस्थित एउटा क्याफेमा ग्याङस्टरको भिडन्तमा चलेको गोली लागेर मीन भामको घटनास्थलमै ज्यान गएको छ । क्याफेकी वेट्रेसका अनुसार मर्नुअघि मीन भामले जिन्स प्यान्टको खल्तीबाट माउथ अर्गन बाजा निकाली राष्ट्रिय गानको धुन बजाएका थिए ।
माथि चर्चा गरिएका जुत्ता प्रहार गर्ने, गोली हान्ने र गोली खाने प्रसंग मीन भामसित जोडिएका केही प्रतिनिधि घटना हुन् । विगत दुई सातायता फिल्ममेकर मीन भाम पत्रिकाको हेडलाइन बनेका छन् । ब्रेकिङ न्युज बनेका छन् । मीन भामले पटक–पटक हत्या गरेका छन् । मीन भामको पटक–पटक हत्या गरिएको छ ।
यतिका मीन भामहरु कताबाट उत्पत्ति भए ? एउटै मान्छे पटक–पटक कसरी मर्छ ? एउटै मान्छेले विभिन्न घटनास्थलमा एकै समय कसरी यतिका वितण्डा मच्चाउन सक्छ ? खोजीको विषय भएको छ ।
खोजीको सिलसिलामा यो संवाददाताले मीन भामको जीवनसित प्रत्यक्ष/परोक्ष रुपमा जोडिएका केही मानिससित सम्पर्क गरेको थियो । भामकी पूर्वप्रेमिका सुजाता कोइराला, २५ (नाम परिवर्तन) ले भनेकी छन्, “मीन भाम हिजो दिउँसो मेरो अपार्टमेन्टमा आएको थियो । हामीबीच आत्माको अस्तित्व विषयमा अचाक्ली विवाद हुँदा मैले चक्कु हानी उसको हत्या गरेकी हुँ । त्यो चक्कु अर्थात् स्वीस नाइफ केही वर्षअघि उसैले मलाई जेनेभाबाट उपहार ल्याइदिएको थियो ।”
महानगर प्रहरी प्रमुख त्रिलोचन दर्शनधारी, ५५, का अनुसार घटनामा संलग्न भामहरु वास्तवमा मीनका मल्टिपल पर्सोनाज हुन् । उनी भन्छन्, “मीन एक छ, भामहरु अनेक छन् । हामी तिनै भामहरुको ओर्जिनल पर्सोनाज मीनको तलासमा छौँ । तर मीन गायब छन् ।”
दर्शनधारीले हामीमाझ एउटा गुप्त रहस्य पनि उजागर गरिदिएका छन् । निजका अनुसार एउटा ओरिजिनल पर्सोनाजबाट मल्टिपल पर्सोनाजको उत्पादनमा भूमिगत गिरोह नै लागेको छ । अहिले ‘मीन एक : भाम अनेक’ को घटना मात्र सतहमा आएको हो । चाँडै नै ‘पुष्पकमल एक : दाहाल अनेक’, ‘शेरबहादुर एक : देउवा अनेक’, ‘बाबुराम एक : भट्टराई अनेक’ जस्ता संक्रामक घटना फैलने छन् । “त्यसो भएको खण्डमा,” दर्शनधारी भन्छन्, “ओलीहरु विभिन्न खालका अपराधमा संलग्न भएको देखिइनेछ, ओलीहरुको ओर्जिनल पर्सोनाज खड्गप्रसाद भने गायब हुनेछ, बिल्कुल मीन भामझैँ ।”
मीन भामका मौसमी मित्र कुमार नगरकोटीको बयान पनि चाखलाग्दो छ । आगे नगरकोटीले बोलेका कुरा नगरकोटीकै शब्दमा ।
कालो पोथी च्यापेर फुटपाथमा लखरलखर हिँडिरहेका मीन भामलाई मैले सोधेँ, “एकाबिहानै यो कालो गृहपन्छी बोकी कता ?” उनले भने, “यो पोथीले प्रेमी खोजेर मलाई हत्तुहैरान पारी । त्यसैले कालो भाले खोज्न हिँडेको ।” त्यसपछि अरु केही नबोली उनी आफ्नो बाटो लागे । म एउटा गल्लीभित्र छिरेँ ।
मीनलाई फेरि देखेँ, खर्पन बोकी कुप्रँदै हिँडिरहेको । खर्पनको एकातिर चम्सुर–पालुङको चाङ, अर्कोतिर पुष्पगुच्छाका रास । उनले मलाई– तारेमाम भाजु– भन्दै एउटा पुष्पगुच्छा दिए । लगत्तै हंसचालामा खोच्चिँदै–खोच्चिँदै गल्लीबाट अलप भए ।
पुष्पगुच्छा बोकी आफ्नै सुरमा हिँडिरहेको थिएँ । कसैले पछाडिबाट आवाज दियो, “जय शम्भो ! भिक्षाम् देही ! अल्लाह के नाम मे कुछ देदे रे महाराज !” पछाडि हेरेँ । मीन भाम कमण्डलु बोकी उभिएका थिए । कमण्डलुमा पुष्पगुच्छा राखिदिएँ । प्रसन्न मुद्रामा भने, “मे गड अलमाइटी ब्लेस यु, माई चाइल्ड !”
कस्तो अचम्म ! ३ वटा मीन भामलाई आज मैले ३ ठाउँमा भेटेँ । अलग–अलग रुपमा/पर्सोनाजमा । ३ मध्ये कुनचाहिँ ओरिजिनल मीन भाम थियो ? म निकै अलमलमा परिगएको छु ।